uAmla noDe Kock benze amaProteas enqobe ngo -5-0
UQuinton de Kock noHashim Amla baqhubeke nothando lwabo neSuperSport Park njengoba bethole amakhulu futhi bahlanganisa i-partnership yokuqala yama-run angu-187 ukubekela amaStandard Bank Proteas ukunqoba ngama-run angu-88 bedlala neSri Lanka kumdlalo wokugcina weMomentum ODI ngoLwesihlanu.
Lokhu kubenze bakwazi ukunqoba i-series ngo-5-0 ukuze banqobe okwesibili kulandelana, kulandela ukunqoba ngendlela efanayo bedlala ne-Australia futhi bathola i-ICC No. 1 ranking kuma-ODI.
UDe Kock, uthole ama-run angu-109 emabholeni angu-87 no-four abangu-16, uAmla, wahlanganisa ama-run angu-154 emabholeni angu-134 no-four abangu-15 no-six abanhlanu, futhi sebehlanganise amakhulu angu-9 phakathi kwabo kulenkundla. Bekuyikhulu lika De Kock lesi-12 elihambelana no-50 abangu-9 ukumnika i-conversion rate engu-58 percent.
UAmla uhlangane noSachin Tendulkar noDavid Warner ukwenza umphumela odlulile ku-150 kane. Kuphinde kwaba ikhulu lakhe lesi-50 kwi-South Africa kanye namakhulu ama-ODI angu-24 kuhambisana namakhulu angu-26 kuma-Test.
Ngokwenziwe yilabadlali, nokho bekuthiwe abashaye kuqala, bakwazile ukubekela iSri Lanka umphumela ongu-385 okube umphumela wesibili omkhulu wamaProteas kulenkundla kanye nomphumela omkhulu kunayo yonke bedlala neSri Lanka.
I-partnership phakathi kwaDe Kock noAmla beku enkulu kunawo wonke bedlala neSri Lanka, ngokuhlula u-150 owahlanganiswa uGary Kirsten noAndrew Hall.
Abadlala phezulu kwi-Sri Lanka badlale ngokungacabangi kahle. Indlela yokujaha umphumela omkhulu ukuthi bakhe ama-partnership kunokuthi bathole o-10 kanye no-20. Ekupheleni kwe-over yesi-9, bebeno-70/4 kanti umdlalo bekufana nokuthi usuphelile.
UAsela Gunaratne noSachith Pathirana bebenenkani ngesikhathi behlanganisa u-93 nge-wicket yesithupha ngaphambi kokuthi uGunaratne ahlanganise ikhulu (114 not out off 117 balls, 14 fours and 2 sixes).
Uma ubheka ngakwiSouth Africa okuhle beku ukuphosa kukaChris Morris othole i-career best engu-4/31. Uphose nge-average speed engu-138km/h waze wafinyelela ku-143.8 futhi uzoba nethuba lokuqhubeka ngendlela efanayo uma sebedlala eNew Zealand.
UAmla ube iMomentum Man of the Match, uFaf du Plessis waba iMomentum Man of the Series. Uqede ene-aggregate edlulile kuma-run angu-400, okubalwa khona amakhulu amabili, futhi walingana noAmla kulama-series amabili adlulile bedlala neWest Indies ngemidlalo emihlanu.
AmaProteas angaphezulu ngo-4-0 kodwa uTharanga usondeze umdlalo esiphethweni AmaProteas azohlonipha abacisha umlilo kwi-ODI yaseNewlands iCSA ihalalisela amaProteas ngokunqoba i-ODI series AmaProteas aqenqeleza ekunqobeni i-series uDu Plessis, noMiller bahlanganise ukunqoba okucacileyo kwamaProteas AmaProteas abuyele enjabulweni AmaProteas abheke ukwakhela kwi-ODI form AmaProteas akhuphulwa ukubuya kwaDe Villiers kumdlalo wokugcina uMathews uhlula ukulimala ukunqobisa iSri Lanka uPhilander noRabada bayacindezela uAmla ugubha ikhulu lakhe lamaTest ngendlela enhle